Google, Microsoft, Facebook ne Instagram Zvitoro ne Zvitoro | David Bridburg ~ Tumira Yemazuva Ano Garari
Iyo Bare Mapfupa naDavid Bridburg
Yangu yenyaya nyaya inodzokera kuna 2006 ine yakapusa pfungwa yekuve dijitari muimbi. Basa rangu rinotanga nekudzidza pachangu muna 2012. Muna 2014 my Postmodernism inotanga kubereka michero.
Kupinda Muhusiku naDavid Bridburg
Mapfupa achiiswa pachena, ini handidi kuve nyanzvi yekuziya nenzara.
Pamwedzi yekupedzisira ye6 ndanga ndichigadzira mishandirapamwe yekutenga. Kutanga neMicrosoft Shopping, wozoshanda paFacebook ne Instagram Stores. Inoteverwa kapfupi neGoogle Shopping izvozvi basa repakati.
Mubhizimusi rekudhindisa bhizinesi tinovimba nenguva yeKisimusi kuti tiite yakanaka kwazvo ROI. Kutanga munaNovember mari yangu yemushandirapamwe ichawedzera.
Kuziva maitiro ekugadzira nekutarisira mishandirapamwe yekutenga ndakatendeukira kumusika webasa.
Toptal ndiye wandinoshandira kurota. Asi kutanga kupi? Ndiri maneja weGoogle wekutenga, maneja weMicrosoft Shopping uye Facebook Instagram Store maneja. Hongu ndine zvakawanda zvekudzidza. Nei uchishanda neni? Nekuti ini ndiri kuda kudzidza nezve izvi uye nekugadzira aya mashopu.
Ruzivo rwangu rwunoita semunhu akazvimiririra wechitatu mutengesi anoshanda aine hombe aggregator. Izvi zvave kureva mashoma ekushandira. Zvangu zvekudya zvave kudikanwa zvakasarudzika mvumo mvumo. Ndine zvese ziso rehonye uye ziso reshiri maitiro.
Vatengi veToptal vaizowana yakanakisa yebasa uye kutarisirwa kubva kwandiri. Ini ndinonzwisisa kuti ndiri basa riri kuenderera mberi nezvakawanda zvekudzidza. Kushanda naToptal unenge uri mukana mukuru uye kukudzwa kwandiri.
Iko kune zvinodiwa kune ino blog positi Ndiri kusangana nedambudziko kusangana. Zvichida nekuti ini ndiri mutsva kumunda. Izvo zvinodiwa kuti ini ndibatanidze kune Toptal peji pane yangu yakasarudzika. Ini handina kujeka nezvekuti Toptal inoronga sei chiitiko changu. Kuzadzisa chinodiwa ini ndinowedzera iyo link kune HIRE YEMAHARA BRAND STRATEGISTS. Kutendeseka ndinoda rubatsiro pazita rangu rebasa. Mune yakajairwa mabasa musika panoratidzika kunge paine yakasununguka runyorwa rwemazita emazita.